देशभरीका चिकित्सकले आज पनि १ घण्टा सेवा बहिष्कार गर्ने
काठमाडाौं । आईतबार एक घण्टा आकस्मिक बाहेकको सेवा बहिस्कार गरेका देशभरीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारी चिकित्सकरूले आज पनि सेवा स्थगनको कार्यक्रम जारी राख्ने भएका छन् । सरकारले संघीय संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेदकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको भन्दै आन्दोनलमा उत्रे...
डा. केसीको दावी, बहुमतको सरकारले जनता...
पुष २३, 2075 काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमतिविपरित चिकित्साशास्त्र विधेयक अघि बढाएको भन्दै सच्चाउन माग गरेका छन् । सोमबार डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो १५ औँ सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा व...
चिकित्सकले आज आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्...
पुष २३, 2075 काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेदकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको भन्दै आन्दोनलमा उत्रेका सरकारी डाक्टरहरुले आजदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने भएका छन् ...
के तपाई गुदपाक र पुस्टकारी धेरै खानुह...
पुष २१, 2075 काठमाडाै‌ । गुदपाक र पुस्टकारी धेरैले रुचाएको गुलियो खानेकुरा हुन् । बजारमा पाइने सबै गुदपाक/पुस्टकारी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छन् भन्ने हुँदैन । ती स्वादिष्ट त हुन्छन्, यद्यपि स्वादका नाममा तिनले मानवीय स्वास्थ्यमा ...
प्रचण्ड भन्छन्, क्यान्सरले कोही मर्नु...
पुष २०, 2075 भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपन्नको उपचारका लागि सरकारले पाँच लाख सहयोग गर्ने भएपछि अब उपचार खर्चको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले गरिब तथा विपन्न...
स्वास्थ्यका लागि अल्कोहल कति हानिकारक...
पुष १९, 2075 काठमाडौं । अल्कोहल सेवनले शरीरमा मात्र नभई मुखमा पनि विभिन्न समस्या देखिने गर्छ । एउटा अध्ययनअनुसार अल्कोहल सेवन गर्ने मानिस सात सय प्रकारका कीटाणुबाट संक्रमित हुन्छन् । अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा मुखको क्यान्सर भएको...
बेरोजगारीको सीमा नाघ्यो, देशभर झन्डै ...
पुष १९, 2075 काठमाडौं । देशमा नर्सहरूको बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ । ६६ प्रतिशत नर्स बेरोजगार छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा कुल ८५ हजार आठ सय ६ नर्स दर्ता भएकोमा २५ हजारले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । काउन्सिलका अनुसार सात हजार नर्स रोजग...
इलाम पुगेका डा. केसीले अनसन नै सारे
पुष १८, 2075 काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अनसनको समय एक सातापछि सारेका छन् । अनसन बसन भनी इलाम पुगेका डा. केसीले सरकारलाई अलिटमेटम दिँदै एकसाता पछि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । डा. केसीले इलामबाट नै विज्ञप्ति जारी गर्दै २५ गतेसम्म ...
डा. केसी आज १६ औँ चरणको अनसन बस्ने तय...
पुष १८, 2075 काठमाडौंं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले आज १६ औँ चरणको अनसन थाल्ने तयारी गरेका छन् । आफ्ना माग पूरा गर्न हिजो सम्मको अल्टिमेटम दिएका केसी सत्याग्रहको तयारीका लागि इलाम पुगेका उनका सहयोगी...
पुष १८, 2075 -छालामा सुक्खापन हटाउन र फुटेको छाला चाँडै ठीक पार्न नियमित मोस्चराइजर गर्नुपर्छ ।-हातमा रासायनिक औषधिको सट्टा प्राकृतिक वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ ।-ग्लिसिरिन र गुलाबजलको मिश्रणलाई बोतलमा भरेर फ्रिजमा राख्नुहोस् र कुनै काम गर...
१६ औं अनसनका लागि इलाम पुगे डा. केसी
पुष १७, 2075 काठमाडौं । पटकपटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्ने भएका छन् । पछिल्लो पटक जुम्लामा १५ औं अनसन बसेका डा. केसीले १६ ओं अनसन इलाममा बस्ने भएका छन् । अनसन बस्न उनी इलाम पुगेका छन् । आफ्नो माग पूरा गर्न दिएको अ...
जानी राखौं, घरमै बसेर यसरी नङ चम्काउन...
पुष १६, 2075 काठमाडौं । मानिसले सुन्दरताका लागि अनेको उपाय अपनाउने गर्छन् । शरीरका अंग अंगको सजावट सुन्दरताकै लागि गरिन्छ । कतिपयले शरीरका विभिन्न भागमा अनेकौ शैली अपनाएर पनि आफुलाई सुन्दर बनाएको सावित गरिरहेका हुन्छन् । नङ प्रत्यक्ष ...
के तपाईको स्मरणशक्ति कमजोर छ ? त्यसो ...
पुष १४, 2075 काठमाडाैं । हामी दैनिक जीवनमा आइपर्ने स–साना कुरा बिर्सिराखेका हुन्छौँ । केही कुरा छिट्टै बिर्सने र त्यो लामो समयसम्म स्मरण नहुने धेरै मानिसको समस्या हुन्छ । स्मरणशक्ति सबै मानिसमा समान हुँदैन । तर, केहीमा रोगका कारण पनि...
के तपाई फिटनेसको लागि जिम जानुहुन्छ ?...
पुष १३, 2075 काठमाडाैं । उकुसमुकुस सहरी जीवन, त्यसमा पनि व्यस्तता, व्यायाम गर्ने उचित ठाउँको अभाव, यस्तै विविध कारणले मानिस मोटोपनको सिकार भएका छन् । यस्तो समयबाट मुक्ति पाउन पछिल्लो समय युवाहरू जिमतिर आकर्षित भएका छन् । विशेषगरी, सहर...
चिसो मौसममा बढि हुने निमोनियाबाट यसर...
पुष १३, 2075 काठमाडाैं । चिसो मौसममा बालबालिकालाई बढि निमोनिया हुने डर हुन्छ । ६ महिनासम्मका बच्चालाई आमाको दूध मात्रै खुवाउने । त्योभन्दा माथिका बच्चालाई आमाको दूधसँगै अन्य खानेकुरा पनि खुवाउने गर्नुपर्छ । यसले शरीरलाई अत्यावश्यक पौष...
← अघिल्लो 12… 44 45 46 47 48 49 50 51 52 … 83 84 पछिल्लो →